Yedu Core Kukwikwidza | GIGALIGHT
Uye nemakore anopfuura gumi 'kukura, Gigalight ikozvino ine yakawanda yeanetwork network chigadzirwa mitsara yemhando dzakasiyana dzekubatanidza kwemaziso uye kufambisa kunyorera. Izvi products inosanganisira transceivers optical, tambo dzinoshanda dzemagetsi, MTP / MPO cabling products, passive optical zvinhu, uye vhidhiyo optics nezvimwe. Gigalight ine zvinhu zvitatu zvakagadzirwa zvikamu zvakatsaurirwa kupa vateereri nehuwandu uye yakasimba michina yekugadzira uye basa.
Gigalight ine matatu akavimbika enjini matekinoroji: VCSEL, PSM4 / PSM8 (Yakafanana Imwe-Mode 4/8-nzira), uye 4WDM/CWDM4. Aya matekinoroji anoderedza mutengo we products, uye ndakapasa bvunzo dzekuvimbika dzakapetwa makumi masere neshanu, dzinovimbisa kuchengetedzeka kwekufambisa kukuru kwedata.
Gigalight yakazvimiririra yakagadzira yayo Yega Kugadzira Executive Sisitimu (MES), yemagetsi pani yekugadzira sisitimu, otomatiki kugadzirisa & bvunzo system (ye transceiver optics), uye kurongeka & yekuverenga visualization system. Isu tiri kuvandudza gore rekugadzira system (kuti izarurike muna Sep, 2018) kuunganidza zvese kugona kuona vatengi 'akagadzirwa kugadzirwa uye manejimendi.
Kubva 2006, Gigalight yanga ichiramba ichitsvaga pasoftware & Hardware kuenderana kwema optical transceivers uye kuvaka yakafuma inoenderana ruzivo base. Parizvino, yedu transceiver optics inoenderana neepasi rose mabhenji. Kutenda kune ruzivo rwekushandira zvidiki & zvepakati vatengi mupasi, Gigalight ine simba yakashandise yekushandura kugadzirisa simba.
Gigalight muridzi wemakore anopfuura gumi 'ehunyanzvi zvakanakira muR & D uye kugadzirwa kweiyo transceiver optics uye zvimwe zvigadzirwa zvemaziso, uye zvishoma nezvishoma inokwenenzvera inovandudza transceiver optics ecosystem. Iyi ecosystem inosanganisira yegore programmplatform iyo inoziva kugadzirisa optics 'coding, online test, ruzivo rwekubvunzurudza pamhepo uye nekudyidzana neyegore server; firmware iri kure yekuvandudza system; akateedzana e transceiver optics macheki; uye gore rekugadzira system iri kuvandudzwa.
5 Core Technologies MaPuratifomu